Ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidko ihany
Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompô. Ny fahasoavana'ny Tompo anie hoaminareo mandrakariva.
Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany anie no ijoroako vavolombelona eto.
Tao anatin'iny herinandro Masina iny, raha sendra nandeha tany ambanivohitra aho, ny asabotsy talohan'ny herinandro Masina izany raha ny marimarina kokoa. Rehefa tonga tany dia nahita fa maloto be ny tanàna, feno asan'ny devoly; devoly aloky nyfahafatesana izany no tena nandrakotra azy. Vao tonga aloha dia nivavaka, avy eo natao ny asa fanadiovana voalohany. Tsapako ho tena mavesatra ny tena iray manotolo. Marihina moa fa ny reniko irery no mipetraka any, ny niatombohany mantsy dia nisy sahona nipetraka teo ambonin'ny saron'ny lava-drano. Tamin'io andro izay nahitana io sahona teo io dia lasa naloto be ny rano tao anatiny ary somary nisy raotrany. nesorina aloha ny rano ary nony ampitso raha sendra haka rano hohanina iny, akory ny fahalehibeazan'ny herin'Andriamanitra, fantany fa mbola maloto ilay toerana ka tototra ny lava-drano, maina tsy misy azo nalaina intsony. Izany ry havana dia midika fa miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra; ary misakana ireo loza izay mety hitranga sy hanjo antsika Izy.
Manaraka izany rehefa tonga aho niaraka taminy fa sendra niakatra taty Antananarivo moa izy, dia nidina tany izahay ny Asabotsy talohan'ny herianandro Masina. Ka izany no nahitako fa tena feno devoly aloky ny fahafatesana teo amin'ilay toerana. Ny sahona mantsy dia manambara ny aloky ny fahafatesana, raha ny fampianarana. Ny zavatra hita manodidina ny trano ihany koa dia feno vitsika be dia be, avy any ivelany mandeha mankao antrano izany no mandeha mankao an-trano. Manaraka izany feno fanenitra ihany koa; misy karazana fanday amin'ny fototra manga anakiray tao ambadiky ny trano. Ka rehefa nony tonga ny tolakandroan'ny Asabotsy izay nahatongavana dia natao ny asa voalohany, tsy niandrasako ela intsony izany.
Rehefa vita ny asa voalohany, natory ny alina, nifoha ny maraina dia nojereko ny manodidina, hita fa efa nihena ny isan'ireo biby sanjo izay miloko hafahafa teo amin'ilay fototra manga. Ny ampitson'iny dia torak'izay ihany koa, satria telo andro moa no nanaovako ny asa sady izay ihany koa no afaka nipetrahako tany. Fa ny alin'ny Alahady kosa dia avy be indray ny orana ary izany dia tsy toa ny orana rehetra fa henonao hoe mitratrevatreva be ilay izy. izany hoe henonao tena mirodorodo any ambony tafo, na ny fianjerany amin'ny tany. teo aho dia nifoha indray nivavaka. Marihina moa fa tany amin'ny faritra Mahasolo iny dia nisy orana foana eny fa na dia talohan'izay aza, rehefa niarina nivavaka aho dia nanotany an'i Jesosy hoe inona no Jesosy no anton'izao orana mivatravatra be izao? Variana amin'ny fianan'izao tontolo izao ny olona, manao fahazarana fotsiny ny amin'ny fanompoana. Ary tena marina izany fa ny fankalazana ny Paska aza, dia hoatrany tsy dia mampiraika ny olona fa ny alatsiany ihany no tena masaka ao an-dohan'ny olona. Aiza ny toerana aleha? Izany no mahavariana ny olona. Dia nifona, nibebaka hoan'ny faritra iray manotolo indray aloha; ny ankamaroan'ny trano dia mando be avokoa ny vodi-trano. Ny sasany aza dia mianjera mihitsy noho ny habetsahan'ny orana. Tao anatin'ny vavaka dia nangataka tamin'i Jesosy ihany koa aho hoe: "Ovay ho tonga afo solifara avy aminao izao orana izao, mba handevona izay rehetra tsy anao amin'ity faritra ity". Dia toa izay foana no nataoko rehefa avy ny orana, fa ny zavatra nangatahiko tamin'i Jesosy kosa dia ny mba tsy hahakasika ny tranonay ny orana satria efa tena mando be ny vodin-trano ary efa tanteraka hatrany anatiny. Ary dia notanterahiny tokoa izany, fa na dia oram-be mivatravatra aza dia zara raha misy orana mitete amin'ny tafo manodidina ny trano, nefa henonao any ivelany any ny orana avy be. Izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ary dia notanterahiny ny teniny ao main'ny Jeremia 33:3 "Antsoy Aho dia hovaliako ianao, ka anehoako zava-mahagaga sy saro-patarina." Ary dia nasehony tokoa ny heriny sy ny fahefany. Izany no midika fa Andriamanitra velona no Tompointsika, Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary tao anatin'izay dia tsapako fa misy fiovana teo amin'ny toerana izay misy anay, ary nandritra iny herinandro Masina iny dia nisy mpanao tafika Masina foana teny an-toerana. Izany no midika ihany koa fa tian'Andriamanitra hovonjena ny olona, satria ny andro Paska dia io no fototra lehibe ijoroan'ny Finoana Kristianina satria, teo no nandresen'ny Tompo ny fahafatesana, izay nantenain'ny devoly fa rehefa maty Jesosy dia mandresy izay; nefa tsy izany no nitranga fa nitsangana tamin'ny maty Izy. Nandresy izany, dia tahaka izany koa no nataony taminay. Ary mino aho fa nisy zavatra nataon'ny Tompo ihany koa teo amin'ny fiainanao. Izany no manambara fa velona Jesosy. Ary hatramin'izay nialako tany dia tsy nisy intsony ny orana fa dia tena maina ny andro. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.
Manaraka izany teo amin'ny fambolena indray dia naneho ny voninahiny ihany koa ny Tompo. Tamin'ny fotoam-pambolena dia maina ny tany, samy namboly avokoa ny olona rehetra, fa teo no nasehon'Andriamanitra fa avahany tokoa ny manompo Azy sy ny tsy manompo Azy. Fa ny anay rehetra na ny an-tanety na ny anaty rano dia tsy nisy voakasika, fa velona avokoa; nefa misy ny an'ny olona sasany efa in-3 na in-4 akory aza no niverenana nambolena dia maty avokoa. Ary ny vokatra tamin'ny vary aloha dia azo lazaina fa tsara, izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany; amin'izao ihany koa ny vary be, na dia betsaka aza ny orana dia tsy misy voakasika ny tanimbary, na dia misy tahalaka niotsaka aza. Ny vary dia tsy voakitika. Izany no manambara fa mbola ao ilay tànan'ny Tompo miaro ny fananan'ny mpanompony. Ary dia tanteraka ny teniny hoe: "Ny zanako sy ny asan'ny tànako, aoka ho adidiko ihany." Izany rehetra izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
Ho anao izay ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao, apetrao amin'Andriamanitra ny fiananao; atolory Azy izay mavesatra eo aminao araka ny teniny hoe: "Mankanesa aty Aiko izay rehetra miasa fatratra sy mavesatr'entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana." Efa nentin'i Jesosy teo amin'ny Hazo fijaliana avokoa ny helontsika, ny aretina rehetra. Koa ankehitriny atolory Azy avela hifantsika amin'ny fantsika rezatra izay anamatsihana an'i Jesosy izay rehetra mbola mampahory anao, koa meteza ho mpandresy tahaka Azy, fa efa nandresy izao tontolo izao sy ny filàny Izy, dia mandehana araka ny finoanao. Mandehana manompoa Azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Mankalazà azy, fa Andriamanitra mahery, Tompon'izao rehetra izao Izy, be hery, be voninahitra.
Ny voninahitra dia hoan'Andriamanitra irery ihany, ny fahasoavany manana amby ampy kosa hoamintsika rehetra.